အဆိုပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ '' Cable ကိုကားဇုန်မှာ Data ဆုံးရှုံးမှု '' ၏ Gurpinar Sakarya နျဌာနခှဲသမ္မတ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 Sakaryaအဆိုပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ '' Cable ကိုကားဇုန်မှာ Data ဆုံးရှုံးမှု '' ၏ Gurpinar Sakarya နျဌာနခှဲသမ္မတ
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, TELPHER 0
sakary IMO ခွဲဒေသ, ဦးခေါင်း, cable ကိုကားတစ်စီး GurpInar မှထိခိုက်ပျက်စီးမှု
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများဌာနခွဲကသမ္မတဟိုစနီမူဘာရက် Gurpinar Sakarya, Sapanca Kırkpınarနှင့်လူမျိုး၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေသောကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. ရေးသားထားသောကြေညာချက်တွင်စီစဉ်ထား၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ..
IMO ကသမ္မတ Gurpinar, လူမှုရေးမီဒီယာလိုချင်သော ropeway စီမံကိန်း Sakarya ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ပြည်နယ်စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုပြောင်းလဲနေသောလမ်း၏အကောင့်မှ Sapanca Kırkpınarကို လုပ်. , စီးပွားရေးမှ၎င်း၏အလှူငွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေးရဦးမည်ကြောင်းမှန်းချက်ရဲ့, ထိုသို့ပြုရမည်ဟုဆိုသည်။
Gurpinar ထိုအကပြောပါတယ်။ "cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကိုစီးတီးစင်တာ (Adapazari-Serdivan) ၏ပထမဦးဆုံးမှတ်တိုင်ဒုတိယရပ်နား Sapanca ခရိုင်ဖြစ်သင့်ကျနော်တို့အကြံပြုနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှအစစ်အမှန်အသုံးအနှုန်းများအတွက်သိသာထင်ရှားသောပံ့ပိုးမှုများကိုစေမည်အဖြစ်ဖျော်ဖြေမယ်ဆိုရင် Sapanca Soğucakကုန်းပြင်မြင့် Project မှ Sakarya စီးပွားရေးတွင်အဆုံးသတ်ရပေမည်။ "ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒေသတွင်းအခြေစိုက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုလက်ရှိစဉ်းစားသည် Kirkpinar ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုအကျိုးကျေးဇူးများထက်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားနှလုံးမိုင်နှိပ်စက်တာ 22 / 11 / 2016 ကမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား၏နှလုံးကိုထိခိုက်စေမလား: အမြင့်မြန်နှုန်းနှလုံးတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အစီအစဉ်များအပေါ်တစ်ဦးအမြင့်မြန်နှုန်းရထားခရီးသည်များ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့သလဲ နှလုံးအထူးကုဆရာမေးခွန်းများရှင်းလင်းပြတ်သားဆောင်ခဲ့လေ၏။ Eskişehir Acibadem ဆေးရုံကြီးနှလုံးရောဂါအထူးကုဒေါက်တာတွင်ပါရှိသော UAVs ထုတ်ဖော် Senol Utku ကြောင့်သာမန်အခြေအနေများအတွက်နှလုံးတိုက်ခိုက်မြန်နှုန်းရထားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပေးမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ နှလုံးတိုက်ခိုက်စွန့်စားမှုအကြောင်းရင်းများထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းဒေါက်တာကြောင်းဖော်ပြထား Senol, ခရီးသည်လူတစ်ဦး၏နှစျသိမျ့အတိုင်းငါတို့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကိုပွငျဆငျပေးကြောင်းမြန်နှုန်းခံစားရပါဘူးနှင့်မည်သည့်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ နှလုံးလူနာအတွက်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားများအတွက်ဒီတော့ ...
Urfa နေ့စွဲတစ်ရှူးဆုံးရှုံးမှုမှာ Data မှ TRAMBUS 25 / 07 / 2018 Şanlıurfaမြို့တော်, အ TRAMBUS စီမံကိန်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်ကောင်စီရဲ့အဖွင့်မြို့ရဲ့သမိုင်းဝင်ထည်ဆာလောင်မွတ်သိပ် Spoor Urfa ဌာနခွဲကသမ္မတ Mehmet Selim ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ဖျောသူအစားစျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့်သူတို့စနစ်က havaray ဖို့မာစတာအစီအစဉ်ကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ Şanlıurfaမြူနီစီပယ်ရဲ့ 30 ဇွန်လ TRAMBUS 2017 အပေါ်သူ၏တင်ဆက်မှုအတွက်စီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်တွင်၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ စီစဉ်ထားတဲ့စီမံကိနျး၏ပထမအဆင့်ပြတိုက်နှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာအကြား47 736 တထောင်မီတာဇုန် stages ။ စီမံကိန်း xnumx'nc, စင်မြင့်နှင့်အလုပ်xnumx'üncxnumx'üncဆက်လက်နေစဉ်။ လက်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကိုကျော်လွှားတိုး Urfa အတွက်လူဦးရေရဲ့ယမန်နှစ်က23 ရာခိုင်နှုန်းကအကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ ...
အင်ဂျင်နီယာများ Konya ဌာနခွဲကသမ္မတအလီ Cinar, လမ်းရထားခေတ်မီခံရဖို့လိုခငျြ 28 / 05 / 2012 ဓါတ်ရထားမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကိုလည်းအရေးကြီးသော Cinar ယူဆစီမံကိန်းများ, "ပထမဦးဆုံးလမ်းရထား, မရှိတော့သေချာပေါက်ယနေ့နှင့်အညီခေတ်မီဖို့လိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ခေတ်မီရပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ် Konya ခွအေနမြေား၏တိုးတက်သောဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုယ်စားယခုဒုတိယအမြေအောက်ရထားစတင်လိုအပ်ပါသည်ကျနော်တို့အသစ်သောလက်စွပ်လမ်းစီမံကိန်း၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ကိုယ်စားအမျိုးမျိုးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ဖော်ပြထားပါပြီ Konya အသွားအလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခဏမတိုင်မီစတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တတိယအရပ်သားလေဆိပ်, တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်ရဲ့အရပ်ဘက်လေကြောင်း terminal ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရဖို့ရန်။ ကျနော်တို့ကတခြားကိစ္စရပ်များဂရုစိုက်ပါလျှင်, Konya မြို့ပြအသွင်ပြောင်းရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလယ်ပိုင်း Konya Aladdin ။ မြို့ပြအသွင်ပြောင်းန်းကျင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ Aladdin ရဲ့နေပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြောင်း ...
Hawthorn - Gurpinar လမ်းဆုံ - Çatak - Aqsa စီမံကိန်းကိုကုမ္ပဏီ Begendik ဖို့နည်းလမ်းတွေနဲ့စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး 06 / 04 / 2013 အဝေးပြေးလမ်းမကြီး (TCK), အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့် "hawthorn - Gurpinar လမ်းဆုံ - Çatak-Beğendikလမ်းများလေ့လာရေးနှင့်စီမံကိန်း Consultancy Services မှ" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Aqsa ဧပြီလ 05 2013 1.245.000 ကုမ္ပဏီများမှအတွက်စာချုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကျော် 1.457.394,155ပေါင်imzalandı.yaklaşıkတစ်ဦးနူးညံ့အတူစီမံကိန်းကိုကုမ္ပဏီပေါင်အဖြစ်ဖော်ထုတ်နုပါဝင်ခဲ့။ ရင်းမြစ်: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းမြစ်: Investments
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gurpinar အဆောက်အအုံစွမ်းအင်ဂီယာလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် siding 20 / 08 / 2019 TEC-coil မူကွဲဟာ signal နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကို DONE2PCs ခြမ်းမှအလုပ်မှာဖြည့်စွက်ရန် (Gurpinar တွင်မှအဆောက်အအုံစွမ်းအင်ဂီယာလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်) သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD)4။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး Tec-ကွိုင်မူကွဲစေသူ Work ပေါင်းထည့်ခြင်းအပေါ် signal များနှင့်တယ်လီကွန်မြူနီကေးစနစ်၏ပမာဏတွင်မှ2မှ (Gurpinar တွင်မှအဆောက်အအုံစွမ်းအင်ဂီယာလိုင်းဆောက်လုပ်ရေး) ကဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အပိုဒ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေ 4734 အမှတ် 19 နေဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် အဆိုပြုချက်ကိုသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: KN ...
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏ Sakarya ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
IMO Sakarya ဌာနခွဲ
Hawthorn - Gurpinar လမ်းဆုံ - Çatak - Aqsa စီမံကိန်းကိုကုမ္ပဏီ Begendik ဖို့နည်းလမ်းတွေနဲ့စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
DTO Antalya ဌာနခွဲကသမ္မတ Erol, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများနှင့်ရထားလမ်းကုန်တင်အကွောငျးပွော
YHT များအတွက် IMO Bursa ဌာနခွဲကသမ္မတŞahinလမ်းကြောင်းအကြံပြုချက်များ
IMO Trabzon ဌာနခွဲကသမ္မတYaylalıမက Metro အလင်းရထားလမ်းစနစ်က
တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-Sen ဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌ Shield ကို Life: Rant လား? သငျသညျကလူပါသလား
သငျသညျ Albayrak တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲကသမ္မတ: "တရုတ်များ၏ Great Wall Sivas ဆွဲထုတ်"